China Gelatin Ishidi kuya Powder ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
Abantu abathanda ukwenza i-dessert ngeke bazizwe bengayazi, kungenye yezithako ezibalulekile zokukhiqiza i-dessert. Umsebenzi ukwenza izithako zijiye, i-jelly eyisisekelo ukuyisebenzisa njengempahla eluhlaza, kukhona i-powder ne-flake emakethe njengamanje, uma ikhaya lakho uqobo, kuphakanyiswa ukuthi usebenzise i-powder kuzoba lula kakhulu. Ngokuvamile engezwa ku-gelatin powder ye-dessert, i-dessert izoba ngaphezulu i-Q elastic, ithenda futhi ihlafuna.
Yenziwe nge-collagen yezilwane nge-hydrolysis. I-gelatin ekhishwe emathanjeni ezilwane (ikakhulukazi amathambo enkomo). Ingxenye eyinhloko amaprotheni. Ingasetshenziselwa ukwenza ukugcwaliswa okuhlukahlukene, ikhekhe le-mousse, uphudingi, u-ayisikhilimu nokunye ukudla okulula, ukuqina, ukunwebeka.Iqukethe ama-amino acid ayi-18, ayisikhombisa awo abalulekile emzimbeni womuntu. I-Gelatin isekelwe kuma-protein ayi-82% ngaphandle kwamanzi nosawoti angaphansi kuka-16%. Ngizokhuluma ngalokho ngomzuzu. Kuyiprothenigen ekahle.
Inokuvikelwa kwe-colloidal, umsebenzi ongaphezulu, i-viscosity, ukwakheka kwefilimu, ukumiswa kwe-emulsion, ukubhuqa, ukumanzisa, ukuzinza, nokuncibilika kwamanzi.Kungenambala futhi akunambitheki, kuncibilika masinyane, futhi umkhiqizo ophelile awunambitheka oyinhlanzi. Ungumsizi omuhle wamakhekhe kanye nama-dessert.Yoncibilika emanzini abandayo ngaphambi kokusetshenziswa.Uketshezi oluncibilikisiwe lunokuthungwa okuhle futhi lukulungele ukuncibilika futhi lusetshenziswe, kulula futhi kulula ukusebenziseka.
Kuyinto i-gel powder evame ukutholakala kuma-dessert wesitayela saseHong Kong. Isebenza njengamashidi e-gelatin, kepha uma igcinwe, idinga ukuvalwa.Ngaphambi kokuphaka, cwilisa ngamanzi abandayo aphindwe kahlanu kunalokho okudingayo, ngakho-ke iphenduka ijeli eqinile. Ishidi lingashintshwa ngenani elifanayo ngokuya ngesilinganiso se-1: 1. Ngaphezu kwesidingo sogwebu kusengaphambili, ukuncibilika nakho kudinga ukuhlukaniswa emanzini afudumele angadluli kuma-40 degrees Celsius, ngaphandle kwalokho kuzothinta ikhono lokuqina.
Izinzuzo zomkhiqizo: i-powder enhle, i-powder encibilikayo, akukho ukunambitheka okumnandi, ukunambitheka okubushelelezi.
Langaphambilini Ishidi le-Gelatin
Olandelayo: AmaSpredishithi Wokukhanya Okuphezulu weGelatin weDessert